Gini bu nmehie megide Mo Nso? | EKPERE NA OZI
Gini bu nmehie megide Mo Nso?
"Ya mere, ana m asị gị, a ga-agbaghara mmadụ mmehie na nkwulu niile, ma a gaghị agbaghara nkwulu megide mmụọ nsọ" (Matiu 12:31).
Nke a bụ otu n'ime nkuzi na mmụta kacha sie ike nke Jizọs nke dị n'Oziọma. Ozi oma nke Jisos Kraist bu ihe gbakwasiri ukwu na ngbaghara nmehie na mgbaputa nke ndi n’kwuputa okwukwe ha na Ya.Ma n’ebe a, Jisos n’akuzi nmehie nke na-apughi igbahara. Ebe ọ bụ na nke a bụ naanị mmehie Jizọs kwuru hoo haa na ọ nweghị mgbaghara, ọ dị ezigbo mkpa. Ma gịnị bụ nkwulu megide Mmụọ Nsọ, oleekwa otu ị ga-esi mara ma ị mere ya ma ọ bụ na i meghị?
Gịnị ka Jizọs na-ekwu banyere ya na Matiu 12?
Otu nwoke mmụọ ọjọọ nke kpuru ìsì ma daa ogbi kpọtara Jizọs, Jizọs gwọkwara ya ozugbo. O juru ìgwè mmadụ hụrụ ọrụ ebube a anya ma jụọ ha, sị: “Onye a ọ̀ bụ Nwa Devid?” Ha jụrụ ajụjụ a n’ihi na Jizọs abụghị Nwa Devid nke ha tụrụ anya ya.
David ekedi edidem ye an̄wanaekọn̄, ndien ẹkekere ke Messiah emi eyedi. Otú ọ dị, lee Jizọs, na-ejegharị n'etiti ndị mmadụ wee na-agwọ kama ị duru ndị agha megide Alaeze Rom.
Mgbe ndị Farisii nụrụ na Jizọs agwọọla nwoke mmụọ ọjọọ ahụ na-enye nsogbu, ha chere na ọ gaghị abụ Nwa nke mmadụ, n’ihi ya, ọ ga-abụrịrị onye si n’aka Setan. Ha sịrị, “Ọ bụ naanị site na Beelzebul, onye isi ndị mmụọ ọjọọ, ka nwoke a na-achụpụ mmụọ ọjọọ” (Mat. 12:24).
Jizọs maara ihe ha na-eche n'echiche ma mata ozugbo na ha enweghị mgbagha. Jizọs mere ka ọ pụta ìhè na alaeze kewara ekewa enweghị ike ijide ya, ọ ga-abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya Setan ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ ya na-arụ ọrụ ya n'ụwa.
Jizọs kwuziri otu o si achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, na-asị, “Mana ọ bụrụ na ọ bụ mmụọ nke Chineke ka m ji chụpụ ndị mmụọ ọjọọ, alaeze Chineke abịakwasịla gị” (Matiu 12:28).
Nke a bụ ihe Jizọs na-ezo aka na amaokwu 31. Nkwulu megide Mmụọ Nsọ bụ mgbe ọ bụla mmadụ kwuru na Setan ihe Mmụọ Nsọ na-eme. Typedị nmehie a nwere ike ime naanị site n'aka onye, ​​site n'ịjụ ọrụ nke Mmụọ Nsọ, ma kwue ụma na ọrụ Chineke bụ ọrụ nke Ekwensu.
Isi okwu a bụ na ndị Farisii maara na ọ bụ Chineke rụrụ ọrụ Jizọs, mana ha enweghị ike ịnabata na Mmụọ Nsọ nọ na-arụ ọrụ site n'aka Jizọs, ya mere, ha kpachaara anya kwuo na ọ bụ Setan kpatara ọrụ ahụ. Nkwulu a megide Mmụọ Nsọ na-eme mgbe mmadụ ma ụma jụ Chineke, ọ bụrụ na onye ahụ ajụ Chineke n’amaghị ama, a ga-agbaghara ya nchegharị. Otu osinadi, diri ndi hutara nkpughe nke Chineke, mara banyere oru nke Chineke, ma juo Ya anya ma sikwa na oru ya buru Setan, obu nkwulu megide Mo Nso ma buru kwa ihe anaghi agbaghara.
Enwere ọtụtụ nmehie megide Mmụọ Nsọ ka ọ bụ naanị otu?
Dika nkuzi nke Jisos na Matiu 12, odi nani nmehie megide Mo Nso, obu ezie na apuru igosi ya n'uzo di iche iche. Mmehie niile megidere Mmụọ Nsọ na-ama ụma na-ekwu na ọ bụ onye iro ga-arụ ọrụ nke Mmụọ Nsọ.
Ya mere, mmehie ndị a "enweghị mgbaghara"?
Understandfọdụ ghọtara mmehie na-enweghị mgbaghara site na ịkọwa ya n'ụzọ dị n'okpuru. Ka mmadu we nweta nkpughe nke Chineke n'uzo doro anya, a choro otutu iju ya iji guzogide oru nke Mo Nso. Enwere ike maybivaghara nmehie, mana onye j whoghar after Chineke mgbe of d of mkpughe d such ot such ah revelation agagh repent echeghar before kwa n'iru Onyenwe any.. Onye na-echegharịghị ka a ga-agbaghara ya. N'ihi ya, ọ bụ ezie na mmehie enweghị mgbaghara, ọ ga-abụrịrị na onye mere mmehie dị otú ahụ nke na ọ gaghị echegharị ma rịọ mgbaghara na mbụ.
Dị ka Ndị Kraịst, ànyị kwesịrị ichegbu onwe anyị banyere ime mmehie na-enweghị mgbaghara?
Dabere n’ihe Jizọs kwuru n’akwụkwọ nsọ, ọ gaghị ekwe omume ezi onye otu Kristi ga-ekwulu mmụọ nsọ. Maka mmadụ ịbụ ezi Onye Kraịst, a gbagharala ya mmebi iwu ya niile. Site na amara nke Chineke, A gbagharala ndi Kristian. Ya mere, ọ bụrụ na Onye Kraịst ekwulu mmụọ nsọ, ọ ga-atụfu ọnọdụ ịgbaghara ya ugbu a, a ga-ama ya ikpe ọzọ ọnwụ.
Otú ọ dị, Pọl na-akụzi na ndị Rom na "ọ dịghị ikpe ọ bụla ugbu a maka ndị dị n'ime Kraịst Jizọs" (Ndị Rom 8: 1). A gaghị ekpe Onye Kraịst ikpe ọnwụ mgbe Kraịst zọpụtara ya gbapụta ya. Chineke agaghị ekwe ka ọ. Onye hụrụ Chineke n'anya enwetalarị ọrụ nke Mmụọ Nsọ na enweghị ike ịkọwa ọrụ ya na onye iro.
Naanị otu onye kwere ekwe na Chukwu kwenyesiri ike nwere ike ịjụ ya mgbe ọ hụrụ ma mata ọrụ nke Mmụọ Nsọ. Omume nka geme ka onye nekwegh ekwe ghara idi njikere inabata amara na ngbaghara nke Chineke. Ikwere na nkpughe nke Mo Nso banyere Jisos Kraist dika Onye-nwe-ayi bu okwu ugha bu otu ihe gha aghaghi ikpe mmadu ikpe rue mgbe ebighebi na enweghi ike igbaghara ya.
Ozizi Jizọs banyere mmehie a na-apụghị ịgbaghara agbaghara bụ otu n’ime nkuzi ndị kachasị sie ike ma na-arụ ụka n’Agba Ọhụrụ. Ọ dị ka ihe na-awụ akpata oyi n’ahụ ma na-atụgharị anya na Jisos nwere ike ikwuputa mmehie ọbụla nke n’enweghi mgbaghara, mgbe ozi-ọma Ya bụ nke mgbaghara mmehie kpamkpam. Mmehie na-enweghị mgbaghara bụ nke ikwulu mmụọ nsọ. Nke a na eme mgbe anyi matara oru nke Muo Nso, ma na iju Chineke, anyi na-aru oru a n’ebe onye iro no.
Maka onye na-ahụ mkpughe nke Chineke, ma ghọta na ọ bụ ọrụ nke Onyenwe anyị ma ka jụ ya, ọ bụ naanị ihe a ga-eme nke a na-apụghị ịgbaghara. Ọ bụrụ na mmadụ ajụ amara Chineke kpamkpam, ọ chegharịghị, Chineke agaghị agbaghara ya, Chineke agbaghara ya, onye ahụ ga-echegharị n’ihu Onyenwe anyị. Anyị na-ekpe ekpere maka ndị na-amatabeghị Kraịst, nke mere na ha nabatara mkpughe nke Chineke, ka onye ọ bụla ghara ime mmehie nke ikpe a.
Jesus, amara gị bara ụba!
Nke gara aga Post Gara aga post:Udo nke ụbọchị: gosipụta nnọgidesi ike
Next Post → Post ozo:Ihe akụkọ McCarrick pụtara maka ụka